Miomana amin’ny faha 150 taonan’ny finoana ireo vaomieran’ny serasera ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
« Sambany natao ny fihaonana eo amin’ny vaomieran’ny serasera ato amin’ny diosezy satria tsara raha mifankafantatra ny rehetra hanaovana ny lamin’asa ary manana anjara toerana lehibe eo anivon’ny fiarahamonina sy ny fiangonana isika » hoy i Mgr Rabemahafaly Fulgence nandritry ny fihaonana. Raha tamin’ny taona 1984 no nijoro voalohany ireo vaomieran’asa tato amin’ny diosezy dia tamin’ny 2005 nankalazana ny faha 50 taonan’ny diosezy vao najoro ny vaomieran’ny serasera. « Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahasahiranana toy izao atrehintsika izao dia mila fitaizana sy fanetsiketsehana ny olona ka ny vaomieran’ny serasera no mila manana fahaiza-manao hiandraikitra ny fitantanana izany» hoy hatrany ny arseveka. Nozaraina telo ny fiatrehan’ny diosezy ny fotoana amin’izao taon-jobily ity ka ny telovolana voalohany dia natao hibebahana ka isany singanina amin’izany ny hanafoanana ny tokan-trano imaso, ny faharoa dia ny fitodihana amin’ny fizakan-tenan’ny diosezy, singanina amin’izany ny fametrahana tatin-drakitra isaky paroasy amin’izao karemy izao hanampiana ireo sahirana toy ny ao am-ponja. 45%n’ireo voafonja ao Ankazondrano mantsy dia katolika hoy ny arseveka ary dite fotsiny no sakafo maraina sy hariva fa kajaha monja ny atoandro ho an’ireo tsy manana havana manatitra sakafo. Ny fahatelo dia ny fiatrehana ny fankalazana. Hisantarana izany ny 01 Aogositra : andron’ny pretra, amin’ny 15 Aogositra indray natokana ho andron’ny relijiozy, ny 26 Septambra dia andron’ny laika. Ny 10 Oktobra no ivon’ny fankalazana izay hatao eny Ambozontany.
« Ankoatry ny fankalazana lehibe hatrehin’ny diosezy io dia iomanana ihany koa ny JMJ Mada hatao any Antsirabe sy ny JNE izay mbola hampiantranoin’i Fianarantsoa koa taorian’iny fandraisana ny Ray Masina Fransoa teto Madagasikara tamin’ny 2019 iny » hoy i Mgr Rabemahafaly Fulgence. Izy rahateo moa no misahana ny vaomieran’ny fifandraisana amin’ny mpiara-belona eo anivon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara ka nampitaina ny hafatry ny Papa amin’ny fankalazana ny andro maneran-tany faha 55 ho an’ny fifandraisan’ny mpiara-belona. Votoatin’izany hafatra izany ny fanentanan’ny Papa ny mpanao gazety hilaza ny vaovao marina araka ny zava-misy hita maso iainan’ny olona azy. Voaresaka tamin’izany ihany koa ny lalàna vao mifehy ny serasera eto Madagasikara ary ny hanamafisana ny tanjona diosezy maitso. Hisy ny lamin’asa 5 taona hapetraka aorin’ity taon-jobily ity.Tao amin’ny lapan’ny ankizy ao Ambalapaiso no nanatanterahana ity fihaonana ity tamin’ny tolakandron’ny Alahady 14 Febroary 2021 lasa teo. Manentana ny rehetra ny arseveka mba hitondra am-bavaka izany rehetra izany satria mbola miaina anatin’ny olana eran-tany ara-pahasalamana dia ny Coronavirus isika.